Ny lohahevitra tokana ilainao amin'ny WordPress: Avada | Martech Zone
Talata, Aprily 17, 2018 Alakamisy Oktobra Oktobra 29, 2020 Douglas Karr
Nandritra ny folo taona, namolavola plugins manokana sy navoaka aho, nanitsy sy namolavola lohahevitra manokana ary nanatsara ny WordPress ho an'ny mpanjifa. Efa lasa roller coaster io ary manana hevitra matanjaka be momba ny fampiharana nataoko ho an'ny orinasa lehibe sy lehibe aho.
Izaho koa dia nanakiana mpanao trano - plugins sy lohahevitra ahafahana manova tsy voafetra ny tranokala. Mpamitaka izy ireo, ary matetika mampisondrotra ny haben'ny pejin-tranonkala ary mampihena be ny tranokala. Ny ankamaroan'ny asa ataonay rehefa mandray asa fampandrosoana ny tranonkala ho an'ny mpanjifa dia ny fanesorana kaody tompony sy ny tsipika an-tsipika izay tsy mampihena ny tranokala fotsiny fa manakana mafy ny fahafahan'ny orinasa manova ny tranokalany ihany.
Tongasoa Theme Fusions 'Avada
Theme Fusion dia nanangana am-pahatsorana ny lohahevitra sy ny plugin mitambatra izay efa niarahako niasa tamin'izy ireo Lohahevitra fivarotana # 1 amin'ny fotoana rehetra, Avada. Namboarina tsara izy io ka ampihariko amin'ny tsirairay amin'ireo tranokala sy ho an'ny mpanjifako tsirairay. Ny singa tsirairay amin'ny fananganana dia mamela ny fanamboarana faran'izay kely - zavatra tena tadiavinao hidina mba hialana amin'ny mpanjifa na tonian-dahatsoratra diso tafahoatra manamboatra marika amin'ny tranokala ary mampiditra olana izay mitaky asa bebe kokoa aza.
Notehirizin'izy ireo ihany koa ny lohahevitra niavaka tamin'ny plugin, ahafahan'ny olona mampiditra lohahevitra vaovao - ary mitazona ny fampiasa amin'ny fananganana manokana amin'ny alàlan'ny andiana plugins. The Lohahevitra Avada kanto, mandroso tsara ary mora miasa. Manatevin-daharana mpanjifa afa-po maherin'ny 380,000 amin'ny fividianana an'ity lohahevitra mahavariana ity!
Zahao ohatra Avada
ny Highbridge Ao Avada ny tranokala
Hatramin'ny nananganana ny tranokala Avada voalohany dia nampiasa ity lohahevitra ity ho an'ny mpanjifanay rehetra aho. Ary, nohavaoziko ihany ny farany Highbridge tranokala ihany koa. Topazo maso ny hatsarany - ary mora dia mora ny nanorina nefa mamaly tanteraka.
Ireo lamina azo alaina amin'ity lohahevitra ity dia tsy manam-petra, miaraka amin'ireo singa sy fahaiza-manao an-jatony izay mahatonga azy io ho nofinofy fotsiny. Tiako indrindra ny ahafahako mitahiry kaontenera sy singa hampiasa indray manerantany amin'ny pejy hafa amin'ny alàlan'ny Fusion Builder. Izy io dia ny rafitra mpanorina pejy tonga lafatra izay mamokatra fisehoseho tarihin'ny rakitra CSS ao anatin'ny tranokala fa tsy pejy mega mihintsy.
Anisan'izany ny Fusion Builder Features
Fampitambarana tsanganana efa namboarina - Raha tokony manampy andry iray isaky ny mandeha ianao dia afaka misafidy mora ny manampy andiana feno ny haben'ny tsanganana atolotray amin'ny tsanganana 1-6.
Fianjera ireo fizarana sy kaontenera - Arotsaho ny fitoeram-pahefana tokana miaraka amin'ny tsindry hitehirizam-pananana amin'ny efijery, na ravao ny kaontenera rehetra indray mandeha eo amin'ny faritry ny bara fanaraha-maso.
Ovao anarana ireo fitoeran-javatra - Apetraho amin'ny anaran'ny fitoeram-bokatra fotsiny ny kursor anao ary omeo anarana izany. Io dia ahafahanao mamantatra haingana sy mora ireo fizarana ao amin'ny pejinao raha vao jerena.
Tariho sy ampidino ireo singa ho an'ny zaza - Ireo singa toy ny kiheba, boaty atiny, toggle sy maro hafa izay mamela singa mihoatra ny iray hatao dia azo alamina indray izao amin'ny alàlan'ny drag and drop.
Anarana manokana ho an'ny singa zaza - Ny interface Fusion Builder vaovao dia mandray ny lohatenin'ny singa zaza ampidirinao ary aseho azy io mba hahalala azy mora.
Fikarohana Function mba hahitana mora ny zavatra sy ny singa - Ny kaontenera, ny tsanganana ary ny fikandrana singa tsirairay dia misy saha fikarohana eo an-tampon'ny havanana mba hikarohana mora foana sy hahitana izay ilainao amin'ny teny tokana tokana.
Vidio ny Theme Avada izao
Rafitra mahafinaritra io. Ity misy andian-dahatsoratra Avada manan-danja:
Fampahafantarana: mpiara-miasa mirehareha amin'ny Themeforest aho Lohahevitra Avada amidy.
Tags: avadalohahevitra wordpress tsara indrindrafitambaranampanamboatra fusionlohahevitra fusionmpanamboatra pejyfoto-kevitrafifangaroan'ny lohahevitraWordPressWordpress theme